Vatori venhau vanoti vari kutyisidzirwa nevamwe vezvematongerwo enyika kuti vasaburitse zvavanenge vataura.
Vanomirira kodzero dzevatori venhau munyika vari kushoropodza mutevedzeri wemukokeri webato reZanu PF, Amai Omega Hungwe, nekutyisidzira vatori venhau kuti vasaburitse zvavakataura.
Amai Hungwe vakataura mashoko aya kuvatori venhau mushure mekunge vaudza vatsigiri veZanu PF pamusangano wakaitirwa paMasvingo Polytechnic College kuti Zanu PF iri kutora ma serial numbers evakanyoresa kuvhota kuitira kuti igadzire gwaro revavhoti reparutivi. Vakatiwo bato ravo richashandisa mauto mukutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo.
Amai Hungwe vakavimbisa kuzotora matanho akaoma, ayo vasina kubudisa pachena, kuvatori venhau vaizoburitsa munhau zvose zvinotaurwa pamisangano yeZanu PF.
Asi bepanhau reTell Zimbabwe rakaenderera mberi rikaburitsa mashoko aAmai Hungwe aya.
Sachigaro veMISA Zimbabwe, VaGolden Maunganidze, vanoti zvakaitwa naAmai Hungwe zvinopesana nemashoko emutungamiriri wenyika, VaEmerson Munangwagwa, avo vari kuvimbisa kuita sarudzo dzichaitwa nenzira yakachena.
“Tinoda kushorodza zvakanyanya zvakaitwa naAmai Omega Hungwe kunyanya takatarisana nesarudzo gore rino, zvinoratidza kuti zvavanotaura hazvienderani nezvinotaurwa nemukuru wavo VaMngangagwa, saka hatichazivi chokwadi nekuti tikaona ivo mutevedzeri wemukokeri webato vachituka vatori venhau kuzoti vamwe vavo vari pasi, zvinoreva kuti vatori venhau vari panguva yakaoma kana vakuru veZanu PF vachivambunyikidza pakuita kwavo basa. Tinokumbira VaMnangagwa vatuke vamwe vavo vanoita izvi.”
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists, VaFoster Dongozi, vanoti kushungurudza vatori venhau vachiita basa ravo kunenge kuri kutyora mitemo yenyika.
“Isu sesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists tinoshoropodza nemashoko akasimbisisa avo vane chekuita nekushungurudza nekuvhiringa mashandiro evatori venhau, hatibvumirane nazvo. Isu sevatori venhau tiri kushanda zviri mumurawu kana mutemo wenyika, kuva mutori wenhau haisi mhosva.”
Mukuru wenhepfenyuro ye Wezhira Community Radio, VaEnergy Bara, vanotiwo kumbunyikidzwa kwevatori venhau panguva ino kunokanganisa kufambiswa kwemashoko kune veruzhinji zvinova zvakakosha pakuitwa kwesarudzo dzakachena.
“Isu zvatotikatyamadza zvikuru, taitarisira kuti kuuya kwakaita hurumende yaVaMnangagwa ichivimbisa kuitwa kwesarudzo dzakasununguka nesuwo vatori venhau tichashanda zvakanaka mukuzivisa veruzhinji zviri kuitika musarudzo. Asi kana zvadai zvotoreva kuti sarudzo dzatakatarisana nadzo hadzingavi dzakasunsunguka, nekuti kusununguka kwevatori venhau chinhu chakakosha pakuitwa kwe free and fair elections.”
Studio 7 yakundikana kubata Amai Hungwe kuti vatipe divi ravo panyaya iyi.
Mupepeti weTell Zimbabwe, VaPassmore Kuzipa, vatiwo zviri kuitwa naVaMnangagwa zviri kupesana nezviri kuitwa nevatsigiri vebato ravo reZanu PF.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya iyi ikasagadziriswa, zviri pachena kuti munyika muchaita sarudzo dzine mutauro.